Vaovao - Ahoana no hisafidianana palitao azo itokisana, tokony hanalavitra an'ireo lesoka ireo isika
Akanjo mitaingina tongotra
Ahoana ny fomba hisafidianana palitao azo antoka, tsy maintsy ialantsika ireo lesoka ireo
Betsaka ny olona mahalala fa ny palitao dia natao manokana ho an'ireo mpankafy fanatanjahan-tena any ivelany. Na izany aza, ny palitao dia akanjo ampiasaina manokana miaraka amin'ny fiasan'ny rano sy ny rivotra. Tsy mahay misafidy ny ankamaroan'ny olona. Samy manana ny endriny miasa amin'ny tontolo iainana izy ireo. Ny olona tsy mahazatra dia hanana diso tsy mifankahazo diso, andao jerena.
Fahadisoana 1: Ny haina kokoa
Ity toe-javatra ity dia matetika miseho amin'ny ririnina. Ny fandraisana anjara amin'ny fanatanjahan-tena ivelan'ny ririnina, ny fanaovana akanjo matevina dia tsara ho an'ny hafanana, saingy ho tery be. Ho an'ny toetr'andro amin'ny ankapobeny, na rehefa mitsangantsangana na miakatra eny ivelany, ny kitapo amin'ny ski dia somary mavesatra. Amin'ity tranga ity, ny ankamaroan'ny olona dia hisafidy palitao na palitao roa vita fanesorana, izay mora kokoa ny hametraka ary hiala ary mety ho fanatanjahantena ivelany.
Tsy fifankahazoan-kevitra 2: Arakaraka ny maha lafo azy no tsara kokoa
Na dia eo aza ny fitsipika hoe "tsy tsara ny tsara," ny lafo kokoa ny palitao dia tsy tsara kokoa. Safidio ny palitao izay afaka mitondra fiarovana sy fanampiana lehibe kokoa ho anao. Amin'ny ankapobeny, afaka misafidy marika fanta-daza, toa ny North Face, Northland, sns. Ireo kitrandraka marika ireo dia samy hafa ny vidiny ary natao indrindra ho an'ny hetsika fitsangatsanganana amin'ny tontolo henjana. Rehefa mividy, na lafo be ny vidiny na tsia dia milaza hoe tsara na tsia ilay palitao. Safidio arakaraka ny asanao manokana.
Tsy fahatakarana 3: Fampiasana feno
Ny fanatanjahan-tena amin'ny tontolo samihafa dia hanana palitao miasa isan-karazany. Ny palitao izay ataontsika dia tsy maintsy ilaina. Aza mahita ny asan'ny hafa ary maniry azy ireo. Raha toa ny tanàna tsotra fotsiny no anaovana dia tsy ilaina ny misafidy Professional, waterproof, rivotra, rivotra ary rivotra mafana fa mafana be sy palitao, ka araka ny toe-javatra misy anao, aza mila fialonana ny hafa ary manahaka ny hafa.
Fotoana fandefasana: Jul-18-2020